Barea de Madagascar : nantsoina indray i Nônô | NewsMada
Barea de Madagascar : nantsoina indray i Nônô
Efatra andro mialoha ny lalao hikatrohan’ny Barea de Madagascar sy ny Repoblikan’i Centrafrique, eo amin’ny fifanintsanana ho an’ny «Can 2017», tanterahina any Gabon, nisy fanovana ny lisitry ny mpilalao ao anatin’ny ekipam-pirenena malagasy. Fihaonana izay hotanterahina any Mahajanga, ny alakamisy 24 marsa ho avy izao.
Nanapa-kevitra Rajaonarisamba Franck sy ny ekipa teknika fa nantsoina hanatevina ny Barea de Madagascar indray i Vombola Jeannot (Nônô). Naharesy lahatra azy ireo mantsy ny zava-bitany sy ny fahavitrihany, nandritra ny fihaonana nikatrohan’ny Cnaps Sport sy ny Wydad Casablanca, ny asabotsy lasa teo. Tsy nijanona ho 23 intsony izany ny isan’ny mpilalao mandrafitra ny Barea de Madagascar fa nitombo ho 24.
Ankoatra izay, voatery nosoloina i Njakanirina Tobisoa, vodilaharana. Noho ny ratra nahazo azy, nandritra ny lalao mandroso, nikatrohany tamin’ny Wydad, tany Maraoka, ny anton’izany. Araka izany, nantsoina haka ny toerany Randrianarisoa Tahina, avy amin’ny Cnaps Sport, izay mpilalao mendrika nandritra ny “Telma Coupe de Madagascar”.